Ukwenza isandi selizwi, iklasi yoku-1, imizekelo? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Indlela yokwenza isandi selizwi, iklasi ye-1, imizekelo?
Kutshanje, umntakwethu esikolweni wanikwa iskim segama: zhik, itanki.
Kwafuneka ndikhumbule yonke into eyayifundiswa esikolweni ngaphambili. Ndikhumbule ukuba umbala othile ulungele isandi ngasinye. Iigowels zihlala zibomvu, iiconsonants ezithambileyo ziluhlaza, kwaye iikonsoniyim ziluhlaza okwesibhakabhaka.
Kukho nokudityaniswa kwezandi xa esinye isiqingatha sexande sipeyintiwe ngombala omnye kunye nomnye kunye nomnye.
Ngenxa yoko, mna nomntakwethu senze ezi nkqubo zilandelayo. Igama elithi zhik: elibomvu-luhlaza-bomvu-luhlaza-luhlaza. Itanki lamagama: blowu-bomvu-luhlaza-luhlaza okwesibhakabhaka.
Yonke into yenziwa ngokulula.
Kuyamkeleka ngokwesiko ukuba isandi ngasinye, iimpawu zaso zifuna umbala othile, izikhombisi zibonisa ubomvu, iiconconants eziqinileyo zibonisa ublowu obandayo, kwaye iiconsonants ezithambileyo zibonisa oluhlaza okushushu. I-algorithm:
Ukwazi ukuba yeyiphi na iiconors ezinzima kwaye ithambile, ungazoba iipateni zalo naliphi na igama, nantsi eminye imizekelo:
Igama elithi TANK liya kujonga: luhlaza-bomvu-luhlaza-luhlaza-luhlaza, kunye ne-Hedgehog-ebomvu-luhlaza (kuhlala kuhlala kukho ikhonsonitha eqinileyo) -mnyama-luhlaza.
Kubafundi bezikolo zaseprayimari, bonke oonobumba kunye nonobumba banemibala yabo xa bezoba isandi sesandi. Ikhonsonitha ethambileyo ipeyintiweyo iluhlaza, ikhonkrithi oluqinileyo luhlaza okwesibhakabhaka, ikhonkrithi ibomvu, njl. Xa udityaniswa nesandi, uxande lupeyintiwe ngaphezulu kwesiqingatha sombala omnye, esinye isiqingatha komnye. Ungawukhumbula lo msebenzi ulula kwaye uhlalutye isandi ngasinye, ungasebenzisa oonobumba abakhetsiweyo, unobumba ngamnye sele upeyintiwe. Ukuzilolonga okunjalo kumvumela umntwana ukuba afunde ngokukhawuleza ukwahlula izandi ezilukhuni kwizandi ezithambileyo, iikonsonitra kwisikhamiso.Uxinzelelo lubekwe kumzobo (Uhonjisiwe ngaphaya kwesikwere).
Ukuqulunqa iskimu sesandi sebanga loku-1 akukho nto inzima. Kuya kufuneka ukhumbule ukuba yeyiphi kunye nemibala ekufuneka uyibonisile. Kwisikimu sisebenzisa imibala emithathu: ebomvu, eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nohlaza.
Ewe kunjalo, kufuneka ukwazi ukuba zithini na izandi. Le miqondiso iza kukunceda.
Imibuzo ye-21 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,275.